Home Wararka Dibada Erdogan & Putin oo kawada hadlay duullaanka ka dhanka ah Kooxda YPG...
Erdogan & Putin oo kawada hadlay duullaanka ka dhanka ah Kooxda YPG iyo Ukraine.
Xiriir telefoon oo dhexmaray Madaxweynayaasha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin waxa ay uga wada hadleen howlgal Militari oo ay damacsan tahay Ankara in ay ku dhaqaajiyo kooxda Kurdiga ah ee Xadka Suuriya ku sugan ee YPG.
Erdogan iyo Putin ayaa dib usoo cusbooneysiiyay heshiiskaan dhacay 2019kii oo dhigayay in Turkiga oo dhaqaajiyo kooxda YPG si ugu yaraan uu u helo 30 KM oo ka nabdoon kooxdaas oo u dhaxeeya ciidanka difaaca Dalkiisa iyo goobaha kooxdu joogto.
Turkiga ayaa damacsan in uu xadka uu la wadaago Suuriya ka gudbiyo Gaadiidka Gaashaaman, Ciidamo aad u hubeysan iyo diyaaradaha dagaalka si uu u qaado howlgallo muddo kooban lagu fuliyo qorshaha lagu dhaqaajinayo kooxda YPG.
Xafiiska Madaxweynaha Turkiga oo qoraal kooban kasoo saaray Xiriirka Telefoon ee dhexmaray Recep Tayyip Erdogan & Vladimir Putin ayaa sheegay in ay isku soo hadal qaadeen dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine 24kii Febaraayo 2022.
Ankara iyo Moscow ayaa isku aragti ka ah in Dowladaha Finland & Sweden ku biirin NATO, Inkasta oo ay ku kala duwan yihiin sababaha ay ugu diidan yihiin labadaas Dowlad ku biirista howlgalkaan, Turkiga ayaa labadaan Dal ku eedeeyay in ay gabbaad u yihiin Kooxda PKK.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa damacsan in uu xoojiyo dedaalka uu ku doonayo in uu ka qaato soo afjaridda duullaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, Wasiirka Arrimaha Dibadda Dalkaas ayaa horay u billaabay wadahadallo uu isugu horkeenayo labada Wasiir Arrimo dibadeed ee Ruushka iyo Ukraine si xal loo raadiyo
Previous articleMaxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Golaha Shacabka & Safiirka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya?
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddiga caleema-Saarka madaxweynaha.
Madaxweynahii hore Hir-Shabeelle Dr Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa yiri Qofka sidaa...
Eddie Nketia Oo Fariin Digniin Ah U Diray Gabriel Jesus, Sabab.